Toos: Xafladda caleema saarka Madaxweynaha oo ka socota Afisyoone - Caasimada Online
Home Warar Toos: Xafladda caleema saarka Madaxweynaha oo ka socota Afisyoone
Toos: Xafladda caleema saarka Madaxweynaha oo ka socota Afisyoone
Muqdisho (Caasimada Online) – Munaasabadda caleema Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhow ka bilaabatay teendhada Afiysoone oo ku taalla xerada Xalane ee Muqdisho, taas oo si heer sare loo soo agaasimay.
Xafladda ayaa waxaa ka qayb-galaya madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, Ra’iisul Wasaaraha Masar Mostafa Madbouly iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed.
Waxaa sidoo kale qeyb-galaya oo madasha wafuud ka socota dowladaha Turkey, Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka Carabta, Malaysia iyo dalal kale oo saaxiib la ah Soomaaliya, waxaana qaarkood ku jiro wasiiro arrimo dibadeedyo.
Waxaa sidoo kale munaasabadda goobjoog ah wufuud ka socota urur goboleedyo caalami ah, sida Qaramada Midobbe, Midowga Yurub, Jaamacadda Carabta, Urur Goboleedjka IGAD iyo Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC).
Madaxda lagu casuumay munaasabadda, oo isugu jira kuwo xulafo la ahaa dowladdii Farmaajo iyo kuwo ay u aragtay cadow, ayaa astaan u ah ka dhabeynta hindisaha madaxweyne Xasan Sheekh ee ah; Soomaali heshiis ah, dunida na heshiis ah la ah.